Xildhibaano ka badan 100 oo madaxweyne Xasan Sheekh ugu baaqay inuu is casilo (Sabab?) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Xildhibaano ka badan 100 oo madaxweyne Xasan Sheekh ugu baaqay inuu is casilo (Sabab?)
Muqdisho – Mareeg.com: Ilaa 130 ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa manta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ugu baaqay inuu iska casilo xilka madaxweynaha, kadib markii sida ay sheegeen uu fashilmay.
Xildhibaanadan oo ku shiray Muqdisho ayaa soo saaray war-murtiyeed ay ugu baaqayaan inuu is casilo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, maadaama sida ay yiraahdeen uu ku guul dareystay lixda tiir ee uu ballan qaaday.
Xildhibaanadan ayaa sheegay in iyagoo awood u leh iney baarlamaanka geeyaan mooshin ka dhan ah madaxweyne Xasan Sheekh ay ku gaabsadeen iney ugu baaqaan inuu is casilo.
Xildhibaan Cismaan Xaaji Cali oo akhriyay war-murtiyeedka ay soo saarayn xildhibaannada ka horjeeda madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sheegay in talada ay soo jeedinayaan ay la ogyihiin wakiilka Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya Necholas Kay iyo guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya, Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari.
Xildhibaanka ayaa sheegay in haddii madaxweynaha uu qaadan waayo talada loo soo jeediyay ay arrintisu tagi doonto baarlamaanka fderaalka ah ee Soomaaliya, islamarkaana mooshin laga geyn madaxweyne Xasan Sheekh.
Xildhibaan C/qaadir Cosoble oo ka mid ah xildhibaanada baaqan jeediyey ayaa sheegay in inta badan xildhibaanada baarlamaanku aysan ku qanacsaneyn qaabka uu madaxweyne Xasan Sheekh wax ku wado.
“Annagoo heyno tiradii saddex meelood hal meel ee mooshinka looga keeni karay madaxweynaha ayaa baaq u wareegnay, si aan dalku qalaanqal u gelin, haddiise madaxweynuhu arrintaas diido ay mooshin rasmi ah geyn doonaan baarlamaanka” ayuu yiri xildhibaan C/qaadir Cosoble.
C/qaadir Cosoble ayaa sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh uusan awood u laheyn inuu sii wado maamulka dalka, wuxuuna yiri “Waxaa inoo muuqata in madaxweynuhu uusan sii wedi Karin hogaanka dalka, waqtigiina sii dhamaanayo”.
Sidoo kale, xildhibaan C/qaadir ayaa sheegay iney iyaga la noqotay inaan dhibku ka taagneyn Raysul-wasaare ee uu dhibaatadu ka taaagan tahay dhanka madaxweynaha, wuxuuna yiri “Xukuumaddii hore ayaa la riday, waxaana la keenay Raysul-wasaare iyo xukuumad cusub, haddana waxba wey socon waayeen marka dhibaatadu maaha Raysul-wasaare ee waa madaxweynaha, marka waa inuu is casilo, haddii kale mooshin ayaan geyn doonaa baarlamaanka Soomaaliya”.
Waa markii ugu horreysay ee xildhibaano tirdaas dhan ay si cad ugu soo jeediyaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inuu is casilo, lana oga jawaabta uu arrintaas ka bixin doono madaxweynuhu.
Madaxweynaha Xasan Sheekh ayaa waxey horay isu qabteen Raysulwasaarihii 1-aad ee markii uu madaxweynaha noqday uu xilka u magacaabay, kaasoo ahaa Cabdi Faarax Shirdoon Saacid, waxaana baarlamaanka kalsoonida kala laabtay bishii December ee 2013.
Kenyan Capital Hit by Blasts Day After mombasa Explosions